Delta deg deg deg ah: Rakaabka oo ku qaylinaya kuna garaacaya albaabka qolka laga baxo
Bogga ugu weyn » Wararka Diyaaradaha » Delta deg deg deg ah: Rakaabka oo ku qaylinaya kuna garaacaya albaabka qolka laga baxo
Delta deg deg ah
Diyaaradda Delta oo duulimaadkeedu ahaa 386 kana soo kacday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Los Angeles ayaa lagu qasbay inay deg-deg deg deg ah u soo degto iyadoo ku sii jeedda magaalada Nashville ka dib markii qof rakaab ah uu isku dayay inuu jabsado qolka diyaaradda.
Rakaabka oo garaacaya albaabka qolka lagu cibaadeysto ayaa ku qeylinaya si loo joojiyo diyaaradda.
Shaqaalihii iyo rakaabkiiba waxay u boodeen ficil si ay u xiraan rakaabka una geeyaan dhabarka diyaaradda.
Rakaabkii waa la saaray markii si deg deg ah loogu degay New Mexico.
Ka dib markii duulimaadku kacay, ninku wuxuu ku orday albaabka qolka cuntada wuxuuna bilaabay inuu ku garaaco, isagoo la sheegay inuu ku qaylinayo "Diyaaradda jooji!"
Rakaabka iyo Shaqaalaha Delta Ninka dhulka dhigay, cagihiisa iyo gacmihiisa ku xirey xarig xarig ah, waxaana loo qaadey dhabarka diyaaradda ilaa deg degga deg degga ah la dhameystiro.
Diyaaradda ayaa samaysay deg deg deg ah Magaalada Albuquerque kadib FBI-du waxay la kulantay diyaaradda oo ay ka saartay rakaabkii iyadoo ku wargalinaysa "ma jirto wax khatar ah oo shacabka loo qabo xilligan."
Jessica Robertson, oo ah madaxa qaybta macluumaadka ee shirkadda Togethxr, ayaa ku jirtay duulimaadka waxayna bartiisa Twitter-ka ku soo qortay: “Waxaan ku jiray duulimaadkan safka 3-aad - markhaati ayaan ka ahaa wax walba. Aad ayaan u argagaxsanahay laakiin kaaliyahayaga duulimaadka @Delta Christopher Williams ayaa si dhakhso leh wax uga qabtay. ”
“Mahadsanidiin shaqaalihii iyo rakaabkii Delta Flight 386, LAX to Nashville (BNA), kuwaa oo gacan ka gaystay qabashada qof rakaab ah oo aan amar ku taaglayn maadama duulimaadku u weecday Albuquerque (ABQ). Diyaaradda ayaa soo caga dhigatay iyadoo aan wax dhibaato ah dhicin, rakaabkiina waxaa ka saaray sharci fulinta, ”Delta ayaa ku yiri hadal uu soo saaray, CBS Los Angeles ayaa soo warisay.